Ntụziaka mbụ maka okroshka na salmon salted | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
N'oge ọkọchị, ọtụtụ na-enwekarị okroshka na tebụl. Kedu ihe kwesiri izo, a na-amata ịhụnanya nke ụmụ amaala ibe anyị maka efere a. A ga-eje ụdị okroshka dị iche iche na ụlọ oriri na ọ restaurantụ anyụ ọ bụla, na chefs nke ụlọ ọrụ ndị a na-anwa ibute usoro okroshka iji tinye ụdị ihe mbụ ahụ na efere ọkacha mmasị gị.
Tried nwetụla mgbe ị nụrụ okroshka na Mpekere salmon nnu? Na-ezute nri nke uto nke oge a - ofe oyi na kvass ya na iberibe azụ uhie, ọ dị ụtọ!
Na akụkụ 5-6 nke okroshka ịchọrọ ngwaahịa:
Achịcha achịcha nke 1,5 l maka okroshka (i.e. unsweetened);
4 obere kukumba;
Xnumx ọkara nduku tuber;
Akwukwo anu acha;
270 gr salmon nwere nnu nnuemechaala ya na filet;
1 bọlbụ uhie uhie (yabasị Crimea, ma ọ bụ Yalta);
35 gr ohuru dill;
nnu nụrụ ụtọ, ude gbara ụka maka akwa akwa.
Isi nri okroshka na salmọn - esi nri
1. Ghichaa poteto ma tinye otu akwa iji sie nri. Obụpde nsen na-esote onye na-ere oku. Wee juzie ma ngwaahịa ma, mgbe ịsachara, crumble n'ime nnukwu efere n'obere cubes.
2. Jiri akpụkpọ dị gịrịgịrị na-enweghị ike wedata cucumbers.
3. Bee yabasị na iri dị ka obere dị ka o kwere mee. Yabasị Crimea dị mma n'ihi na ọ dịghị ilu, ọ bụ ihe ọicyụ andụ na-atọ ụtọ. Odi nma maka ofe oyi, o kwesiri ekwenye ya. Na mgbakwunye, ọ bara ezigbo uru.
4. Na-esote, dịka ntuziaka maka okroshka nwere salmọn - belata ị ga na alaka dill, were mma dị nkọ gbue akwụkwọ ya. Zipu cucumbers, eyịm na dil na nnukwu efere maka àkwá na poteto.
5. N'ikpeazụ, belata salmon ahụ nke ọma ka chirichie tupu ya agbaa friji. Tinye na nnukwu efere na okroshka na mix, nnu nụrụ ụtọ.
6. Were otu kvass na ọkara nke kvass ma were iko mmanya gbara ụka. Ebido nke ọma ma gbanye n'ime okroshka. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, friji ihe dị ka otu awa tupu ị na-eje ozi.
Okroshka nwere salmon nke nnu na mmiri mmiri na kefir - Ntụziaka na vidiyo
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,313.